ईश्वरसँग मेरो ठूलो गुनासो छ | नेपालको सम्झना
Browse » Home » कुराकानी » ईश्वरसँग मेरो ठूलो गुनासो छ
अन्याय त हामीप्रति पो भएको छ । हामीले गाईजात्रा कार्यक्रम देखाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नेताहरूले खोसिदिए । संविधान नामको प्रहसन देखाउन भित्र पसेकाहरू अहिलेसम्म निस्किएका छैनन् । अनि हामीले कहाँ कार्यक्रम देखाउने ?
त्यतिखेरै विरोध गर्नु पर्दैन्ाथ्यो ?
उनीहरू देशका हिरो हुन्, उनीहरूले राम्रो काम गर्लान् भनेर बधाई दिँदै पठाएको, उनीहरू त जोकर पो भएर निस्किए । जोकर होइन, भिलेन नै भए । उनीहरूको विरोध गरौं, अरू नेता विदेशबाट ल्याउन नमिल्ने । नगरौं उनीहरूको प्रहसन हेरेर जनता वाक्क भैसके ।
अब विरोधको स्वर अरू हलबाट उराल्ने हो कि जस्तो राष्ट्रिय नाचघर, एकेडेमी...?
हास्यव्यङ्ग्यमा लागेका अरू पनि कलाकार छन् । हामीले गछौं भन्नेबित्तिकै उहाँहरूको काम ओझेलमा पर्ने भयो । अहिले उहाँहरूले ती हलबाट हाम्रा नेतागणलाई सम्झाउनु हुन्छ, सुन्नुभएन भने हामी पनि मैदानमा उत्रौंला ।
सबै मिलेर एकसाथ कार्यक्रम गरे भैगयो नि ?
के गर्नु, हामी स्टेजमा चढेपछि दुई चार घण्टा ओर्लन मन लाग्दैन । सिनियर भएको फाइदा उठाउँदा अरूलाई अन्याय पर्छ । सबै मिलेर गरौं न भन्ने हो भने दर्शकसँग पाँच-सात घन्टा एकै स्थानमा बस्ने धैर्यता हुँदैन । के गर्ने होला भनेर सोच्दैछौ ।
यसरी सोच्दासोच्दै धेरै वर्ष बितिसके, दर्शकले महले स्टेज बिर्सियो भन्ने आरोप लगाउन थाले नि ?
कलाकारहरूका लागि स्टेज भनेको आमा हो । तिनै आमाले हुर्काइन्, बढाइन् । यहाँसम्म पुर्‍याइन् । उनलाई कसरी बिर्सनु ?
होइन, इलेक्ट्रोनिक मिडिया नामको प्रेमिकाको फन्दामा परेपछि आमा बिर्सिएको आरोप छ नि ?
अँ प्रेमिकाको फन्दामा त परेको हो, तर आमाबाट टाढा लाने प्रेमिका होइनन्, हाम्रा कतिपय दर्शक हुन् । नेपालको कानुन पनि हो ।
कसरी ?एउटा आधा घन्टाको कार्यक्रम बनाउन पूरा एक महिना लाग्छ । मेहनत गरेर बनायो, तर एक सो देखाउनेबित्तिकै त्यो भिडियोमा खिचिएर देश-विदेश पुग्छ । हामी कति अनुरोध गछार्ंै, यसरी खिच्दा हामी अरू स्थानमा सो देखाउन पाउँदैनौं, हाम्रो लगानी उठ्दैन भनेर हात जोडेर बिन्ती गछौं, तर हृदय नभएका केही व्यक्तिले हाम्रो कुरा सुन्दैनन् । कपी राइटको कानुन पनि लगाउन सक्दैनौ । त्यसो भएपछि चित्त दुख्दो रहेछ । आम्दानी पनि नहुने, सिर्जना पनि अरूले नै चोरेर खाइदिने भएपछि आमाबाट टाढा हुनुपरेको हो, तर आमालाई कसरी बिर्सन सकिन्छ र ?
भनेपछि अब स्टेज कार्यक्रम नगर्ने ?
होइन गर्ने । भिडियो बनाउन कडिकडाउ गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्छ । तर के गर्नु ? हाम्रा नेताहरूको रिहर्सल कहिल्यै सकिन लागेन । न संविधान बनाउँछन्, न त ठाउँ नै छाड्छन् । बडा ढिट रहेछन्, यिनीहरू त ।
विदेश पनि जान छाड्नुभयो, बुढेशकाल लागेको हो ?
विदेशमा कार्यक्रम गर्ने हो भने हामी अहिले पनि वर्षको ८ महिना बाहिरै हुन्छौं, तर समस्या त्यही हो । एउटा सहरमा कार्यक्रम गर्‍यो, अगाडि नै सिडी बनेर त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम छ्याप्छ्याप्ती हुन्छ । यस्तो चित्त दुख्ने काम नगरौं भनेर चुप लागेको हो । बुढेसकाल लागेको भए नेपालमा यतिका कार्यक्रम कसरी चल्थे ?
३० वर्षदेखि पत्रकारहरूको संगतमा हुनुहुन्छ । उनीहरूले सोध्ने सबैभन्दा खराब प्रश्न कुन लाग्छ ?
धेरैजसो पत्रकारले सोध्छन्, तपाईर्ंहरू एनजीओको कार्यक्रम गरेर पैसा किन लिनुहुन्छ ? यसरी सोध्छन् मानौं एनजिओ भनेका डन हुन्, उनीहरूसँग पैसा लिनु ठूलो अपराध हो । उनीहरू अपराधी हुन् भने कानुनमा तोक्नुपर्‍यो । हामीले त काम गरेर पैसा लिने हो । त्यो गलत कसरी भयो ?
पत्रकारहरूको चिन्ता एनजीओका कामले महको सिर्जना मर्छ भन्ने हुन सक्दैन ?
चिन्ता त्यो पनि हुन सक्छ, तर हास्यव्यङ्ग्यमा सन्देश पनि गयो भने राम्रै हुन्छ नि होइन र ? मुख बिगारेर विनासन्देश हँसाउनुभन्दा सन्देश दिँदै हँसाउनु राम्रो होइन र ? केही समयअघि हामीले तराई र पहाडका क्षेत्रमा खुला ठाउँमा दिसा बस्ने नेपाली समस्याका बारेमा कार्यक्रम बनाएका थियौं । एकाइसौं शताब्दीका नेपालीहरूलाई यसरी दिसा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ । अब महले यसरी दिसा बस भनेर सिकायो भने जनता मान्न तयार छन् अरूले भनेको मान्न तयार छैनन् । अनि के गर्ने त तपाईं नै भन्नुहोस् ।
पत्रकारले धेरै सोध्ने प्रश्नचाहिँ कुन हो ?
तपाईंहरूको भेट कहाँ भयो ? जोडी कसरी बन्यो ? इत्यादि । यो प्रश्नको उत्तर हामीले एक लाखपटक दिइसक्यौं होला । त्ौपनि त्यही प्रश्न ? म त छक्क पर्छु ।
तपाईंले सबैभन्दा धेरै झूटो उत्तर दिएको प्रश्न ?
म आफूले बोलेकामध्ये ५० प्रतिशत झूटो बोल्छु । किनभने मानिसले कहिले पार्टीमा बोलाउँछन्, कहिले कार्यक्रममा ? यस्तो बेलामा म बाहिर छु, भ्याउँदिनँ, सुटिङ छ भनेर ती कुरालाई टारिदिन्छु । पत्रकारको प्रश्नमा भने मैले त्यति धेरै झूटो बोलेजस्तो लाग्दैन ।
यो देशमा कलाकार भुवन केसी प्रधानमन्त्री भए भने तपाईंको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?
अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ । किनभने भुवन केसीले त जति सिनेमा बनाए, हिट भए । उनी आफ्नो काम कति गम्भीरताका साथ गर्छन् भन्ने कुरा त दुनियाँले देखिसकेको छ । तोकिएको समयमा संविधान नबनाउने नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको पद भुवन केसीलाई दिँदा हुन्छ।
अनि मन्त्रिमण्न्डलचाहिँ कस्तो बनाउनुपर्ला ?
प्रधानमन्त्री भुवन भएपछि मन्त्रिमण्डलमा पनि कलाकारकै भए राम्रो गाईजात्रा हुन्छ । त्यसका लागि रेखा थापालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्ला । किनभने सुजाताभन्दा त रेखा नै ठीक होलिन् । रेखा भएपछि प्रचण्ड पनि मख्ख पर्ने । त्यसो भए बन्द-हड्ताल पनि नहुने । अर्थमन्त्री भने भुवनकै श्रीमती सुस्मितालाई बनाउनुपर्छ । उनी सिनेमा बनाउँदा एक-एक पैसाको हिसाब-किताब राख्छिन् रे । गृहमन्त्रीका लागि राजेन्द्र खड्की ठीक होलान् । उनी फिलिममा भिलेन भए पनि असलमा अपराधीलाई ठोक्न माहिर छन् । अँ सञ्चारमन्त्रीमा ऋषि धमलालाई राख्न्ाुपर्ला । किनभने उनले आजभोलि टेलिभिजनअघि उभिन छाडेर अभिनय गर्न थालेका छन् रे ।
मन्त्रिमन्डलमा महको मन्त्रालय कुन होला ?
हामीलाई शिक्षा सहायक मन्त्री बनाए हुन्छ । किनभने हामीले जति यो देशमा जनचेतनाको काम गरेका छौं, त्यो सायदै कुनै मन्त्रीले गरेको होला । एड्ससम्बन्धी कार्यक्रम बनाउनुपर्‍यो भने हामी संसारभरको एड्सको रिपोर्ट पढ्छौं । हामीले जति पनि कार्यक्रम बनायौं, त्यसमा लामो ठेलीका ठेली अध्ययन गरेका छौं । यी मन्त्रीभन्दा त हाम्रो पो अध्ययन बढी छ भन्ने लाग्न थालेको छ ।
आजभोलि पत्रपत्रिकामा हरिवंशको मात्र अन्तरवार्ता आउँछ, बाहुन पत्रकारहरूले मदनकृष्णलाई पाखा लगाउँदैछन् भन्ने रिपोर्ट मदनकृष्णकहाँ पुग्छ रे, के भन्नुहुन्छ ?
पहिले भोट पाउन नेताहरूले जातको बी रोपेका थिए । अहिले त्यो वनमाराजस्तै यसरी फैलिसक्यो, जसले समाज र देशलाई नै विषाक्त बनाउन थालेको छ, तर यस्तो बीउ हाम्रो बीचमा रोप्दा त्यो बीउ तुरुन्तै मर्छ । बीउ रोप्ने मानिसले उल्टै गाली खान्छ । किनभने यस्तो बीउ उम्रन अनपढ हुनुपर्‍यो । संसार नबुझेको हुनुपर्‍यो । हामी त्यति मुर्ख छैनौं ।
राजधानीलाई काठमाडौंबाट चितवन सार्ने कुरा भैरहेको छ, कस्तो लागेको छ ?
चितवनमा किन वर्षौंदेखि गैंडा मारिरहेका छन् ? किन जंगल मासिरहेका छन् भनेको त बल्ल बुझें । यही राजधानी सार्नका लागि पो रहेछ । काठमाडौंको खेती योग्य जमिन मासेर नेताहरूको रहर पुगेनछ । अब जंगली जनावर र जंगल मास्ने योजना बनेछ ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेलको डिजाइन बनिरहेको छ रे, खुसी लागेको छैन ?
एउटा बल्भ बाल्न बिजुली नपुगेर लोडसेडिङ गर्नुपरिरहेको अवस्थामा बिजुलीको रेल चलाउने रे ? कसरी चल्छ ? के ५ सय ९९ सय सभासदले ठेलेर चलाउने ?
यदि मदनकृष्ण श्रेष्ठ अथवा तपाईंमध्ये एक जना युवती हुनुभएको भए ?
हाम्रो भेट नै हुँदैनथ्यो । किनभने केटीको संगत गर्ने हाम्रो बानी छैन ।
यो मित्रता देख्दा त तपाईंहरूको विवाह नै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, होइन र ?
मदनकृष्ण श्रेष्ठ मेरो दाइ हुनुहुन्छ । म युवती भएको भए पनि उहाँ मेरो दाइ नै हो । दाइ र बैनीको विवाह भएको देख्नुभएको छ ?
आफूले गरेको अभिनयमा विश्वास नलागेको क्षण छ ?
आमा टेलिश्रृंखलाकी आमाको अभिनय मैले नै गरेको हो भन्ने कुरामा म कहिलेकाहीं अविश्वास गर्छु । म ५ फिट १० इन्च अग्लो व्यक्ति कुप्री आमाको अभिनय गरेको थिएँ । त्यो यति सजीव भएछ कि मलाई नै म हो जस्तो लाग्दैन । अफगानिस्तानमा बसेका नेपालीहरूले पनि यही विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
नेपाली नेताहरूमध्ये राम्रो कलाकार को हो जस्तो लाग्छ ?
सबै कलाकार नै हुन् । नेता त उनीहरूको नाम मात्र जोडिएको हो । केपी ओली र कृष्णप्रसाद भट्राई चाहिँ हास्यव्यङ्ग्यकार नै हुन् । उनीहरू जे बोल्छन्, त्यसमा हास्य र व्यङ्ग्य लुकेको हुन्छ ।
जीवनमा तपाईंले धेरै पाउनुभयो, ईश्वरसँग कुनै कुनासो बाँकी छ ?
ईश्वरले मलाई नेपालमा जन्म दिए । यो देशमा कति राम्रो हिमाल छ, हरियाली पहाड छ । कति राम्रो वातावरण छ । विश्वमै कतै नभएको विविधता यो सानो मुलुकमा छ । यस्तो सुन्दर देशमा एउटा गतिलो नेता नजन्माइदिएकोमा भने मलाई ईश्वरप्रति ठूलो गुनासो छ ।
प्रस्तुति ः अश्विनी कोइराला
साप्ताहिक पत्रीकाबाट साभार
0 comments to “ईश्वरसँग मेरो ठूलो गुनासो छ”